Atao lalàna tsy azo kasihina ihany koa, ny tompon'ny tany no tompon'ny harena amboniny, ambanin'ny tany.
Ny Ranomasina manodidina faritra marivo 50 milles ohatra mizara amin'ny Fokontany, Kaominina, Région.
1mille (tononina amin'ny teny angilisy hoe "mail") dia fandrefesana eny an-dranomasina (1mille nautique = 1 852mètres).
Ny Firenenana manana ranomasina dia manan-jo iraisam-pirenena 200milles (tononina hoe 200 mailsss) na ZEE na "Zone économique exclusive", izany hoe miala 370.4km manodidina ny sisin-tanitsika izany dia fari-dranomasina antsika avokoa.
587 000Km² ny velaran-tanintsika, 5% amin'io ihany no misy fambolena, ary ny 15% ihany hatreto no misy olona mipetraka, ny 80% tanintsika izany dia babangoana tsy misy olona, tsy misy fambolena, dia lasa 1 225 259km² miaraka amin'ny fari-dranomasina,miaraka amin'ny harena ao aminy, ary 1 812 300Km² miaraka amin'ny plateau continental, izany hoe mbola antsika ihany koa ny tany mitohy ao ambany ranomasim-be ao, izay misy solika sy gaz avokoa ireny.
Tsy resahiko ireo Nosy Malagasy izay mazava ho azy fa antsika, tsy ilaina fiaraha-mitantana izany. Resaka hafa iny.
Izany hoe ny fidirana ny Port, vavalapasy, ary ny fitantanana ny Port, na port fluvial io na port maritime, na ny harena ao anatiny, sy izay fiarovana ny tontolo iainana ao dia anjaran'ny Fokontany 50%, Kaominina sy Région 25%, Foibe 25% ny ao amin'ny fari-dranomasina marivo na ny 50milles.
Ny 150 milles ambiny, anaty rano lalina, na "en eau profonde" dia an'ny Fajakana Foibe, ny solika an-dranomasina, ny jono au large, ny fiarovana ny morontsiraka, ny fivezivezena an-dranomasina, ny fiandrianam-pirenenena.
Ny Habakabaka, an'ny tompon'ny tany ny faritra azo anorenana, fampakarana building, ny ambonin'izay dia an'ny fanjakana foibe manontolo, na ny harena ao, na ny fikajiana sy fiarovana azy, ny tontolo iainana, ady amin'ny setroka, ny fivezivezena ao, ireo faritra tratran'ny drone, ny misy ny hélicoptère, ary ny misy ny faritry ny fiaramanidina. Ny eny amin'ny satellite moa dia efa lalàna iraisam-pirenena no mandrafitra azy.
Tsy mila hiandrasana ela izany, mivory amin'ny volana oktobra izao ireo Solombavambahoaka, dia efa azo apetraka izay lalàna izay. Raha hanova Lalampanorenana moa alohan'izay, dia soraty ao. Aza atao vava intsony ny hoe fitsinjaram-pahefana, fa tanterao ao anatin'ny 3 volana io, dia matoky ny rehetra.
Rehefa mandroso sy tompon'andraikitra feno ny Fokontany, ny Kaominina sy ny faritra tsirairay, teraka ho azy ny fifankatiavana sy ny tsy fanavakavahana ara-piaviana na ara-poko, ny Malagasy dia miray ary tokana, porofon'izany ny Barea.